किन मौन छिन् प्रियंका ? « Mazzako Online
किन मौन छिन् प्रियंका ?
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा गसिपमा रमाउन निकै माहिर मानिन्छिन् अभिनेत्री प्रियंका कार्की । नेपालमा रहँदा होस् या विदेशमा नै पुग्दा किन नहोस्, अभिनेत्री कार्की कुनै न कुनै रुपमा आफूलाई मिडियामा ल्याउन सिपालु छिन् ।
तर, करिब एक महिना अगाडि अमेरिका पुगेकी कार्की अहिले चुपचाप देखिएकी छिन् । सामाजिक संजालमा पनि उनी खासै सक्रिय देखिएकी छैनन् । अमेरिकामा आयोजना भएको सांकृतिक कार्यक्रमका लागि अमेरिका पुगेकी कार्कीले सामाजिक संजालमा तस्बिर पनि पोष्ट गरेको पाइदैन ।
निर्देशक निलु डोमा शेर्पाको निधन भएपछि प्रियंकाले कालो प्रोफाइल पिक्चर्स राखेकी थिइन् । यसपछि भने उनी मौन देखिएकी छिन् । केही फिल्ममा काम गरेपछि लामो सेड्यूल बनाएर अमेरिका हानिएकी कार्की केही दिनमै नेपाल आउनेछिन् । तर, यसपटक भने उनले विदेशमा रहेर पनि चर्चामा आउने त्यस्तो बहाना खोजिएको देखिएको छैन ।